Wasiir: Haddii uu jiro musuq maasuq aan sameeyay caddeyn ha loo keeno - Caasimada Online
Home Warar Wasiir: Haddii uu jiro musuq maasuq aan sameeyay caddeyn ha loo keeno
Wasiir: Haddii uu jiro musuq maasuq aan sameeyay caddeyn ha loo keeno
Garoowe (Caasimada Online) – Iyadoo dhawaan eedeymo Musuq-maasuq loo jeediyay Wasiirka howlaha guud iyo gaadiidka Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi, ayaa waxaa arrintaasi ka hadlay Wasiirka.
Wasiirka ayaa sheegay in laga faafiyay warar sheegaya inuu lunsaday dhaqaale xoogan oo loogu tallo galay dhismaha wadada laamiga ah ee Garowe Gaalkacyo, balse waxa uu tilmaamay in eedaasi ay tahay mid aan sal iyo baar ku laheyn xaqiiqda jirta.
Cabdirashiid, ayaa sheegay in shaqsiyaad ka tirsan maamulka ay ka faafiyeen been abuur waxa uuna carab dhabay inay mudan tahay in eeda loo jeediyay ka hor la sameeyo baaritaan ku aadan dhaqaalaha la lunsaday.
Waxa uu tilmaamay in shaqsi ahaantiisa uu ka caafimaad qabo eeda loo jeediyay waxa uuna ku baaqay in maamulka uu dib ugu laabto eeda isla markaana la baari lunsashada la sheegay.
Warbaahinta qaar oo xiganeysa mas’uuliyiin ka tirsan maamulka Puntland ayaa qoray in Wasiir Cabdirashiid uu lunsaday dhaqaale ay bixisay dowladda Jarmalka taa oo loogu tallo galay in lagu dhiso wadada laamiga ah ee Gaalkacyo iyo Garoowe.
Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa ku tilmaamay kuwa warkaas faafiyey cadow ka soo horjeeda horumarka Puntland isagoo carabka ku adkeeyey inaan marnaba wax musuqmaasuq ah lagu samayn dhismaha wadadaasi.
Haddalka Wasiirka ayaa kusoo beegmaaya xili Saxaafada ay aad u hadal heyso dhaqaalaha la sheegay in Wasiirka uu lunsaday.